अनुहारको सुन्दरता चाहानुहुन्छ ? दैनिक कानुहोस यो १० कानेकुरा::kamananews
अनुहारको सुन्दरता चाहानुहुन्छ ? दैनिक कानुहोस यो १० कानेकुरा
सुन्दर अनुहार को चाहँदैन ? चमकदार छाला को चाहँदैन ? तर, यसका लागि बिहान-बेलुकी क्रिम घसेर मात्र पुग्दैन ।
सौन्दर्य प्रशाधनले मानिसलाई क्षणिकरुपमा सुन्दर बनाउँछ, जुन दिगो हुँदैन । दिगो सुन्दरताका लागि भने आफ्नो जीवनशैलीमै सुधार ल्याउनुपर्छ । विशेषतः खानपानमा । यहाँ हामी १० वटा खानेकुराहरु सिफारिस गर्दैछौं, जसको सेवनले तपाईं सुन्दर अनुहार र स्वस्थ छाला पाउन सक्नुहुन्छ ।
-करेलाले रगतलाई सुद्ध गर्छ, त्यसैल यसको सेवनले डण्डीफोर आउँदैन ।
-भिटामिन ए बाट भरपुर करेला एउटा राम्रो एन्टिअक्सिेडेन्ट हो, जसले छालालाई स्वास्थ बनाइराख्छ ।
-करेलाले एन्टी एजिङको काम पनि गर्छ । यसको सेवनले छाला जवान देखिन्छ ।
-अनुहारमा डण्डीफोरका गाढा दाग छन् भने करेलाको पत्ता पिसेर लगाउँदा फाइदा मिल्छ ।
-परवरले पनि रगत सुद्ध गर्ने काम गर्छ, जसले गर्दा छालासम्वन्धी समस्याहरु आउँदैनन् ।
-परवरको नियमित सेवन गर्दा स्किन एलर्जीबाट छुट्कारा मिल्छ ।
-दाद र लुतोमा परवरको पत्ताको रस लगाउँदा पूर्णरुपमा निको हुन्छ ।
-मेथीको सेवनले पेट सफा रहन्छ, जसले गर्दा छाला स्वस्थ र कान्तियुक्त देखिन्छ ।
-मेथीको सेवनले छालाका रोगहरु लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
-मेथीको पत्ताको रस वा मेथी पिसेर कपाल धुनाले काल चमकदार र मजबूत हुन्छ ।
-मुलाको तरकारी खाने वा मुलाको रस पिउने गर्दा रगत शुद्ध हुन्छ र डण्डीफोर आउँदैन ।
-एक महीनासम्म लगातार मुला खानाले डण्डीफोरका दाग-धब्बाहरु कम हुन्छन् ।
-मुला काटेर डण्डीफेारमा रगड्दा डण्डीफोर गायब हुन्छ ।
-मुलाको रसमा तिलको तेल मिलाएर कपालको मसजा गर्दा कपाल र्झन कम हुन्छ ।
-एन्टी अक्सिडेन्ट गुणयुक्त लसुन खानाले छाला शुन्दर देखिन्छ ।
-नियमि लसुनको सेवनले तपाईंको र तपाईंको छालाको आयू लामो हुन्छ र छाला जवान देखिन्छ ।
-डण्डीफोरमा लसुनको कल्ली पिसेर दल्दा फाइदा हुन्छ ।
-भिटामिन ए र सीबाट भरपूर टमाटरको सेवन गर्दा डण्डीफोर आउँदैन र छाला स्वस्थ रहन्छ ।
-टमाटरको नियमित सेवनले छालामा चमक आउँछ ।
-अनुहारमा टमाटर लगाउँदा रौंका छिद्रहरु बन्द हुन्छन् ।
-नेचुरल स्किन गार्ड अंगुरको सेवनले घामको प्रभावबाट छालालाई जोगाउँछ ।
-अंगुरको सेवनले छालाको चाउरीपन कम हुन्छ । यसबा लामो समयसम्म छाला जवान देखिन्छ ।
-भिटामिन सीबाट भरपूर अंगुर खानाले केवल छालाको मात्र नभएर कपाल र आँखाको पनि सुन्दरता बढ्छ ।
– कागतिको सेवनले भिटामिन सीको पूर्ति हुन्छ । यसबाट छाला स्वस्थ बनिरहन्छ ।
-अनुहारमा कागतिको रस लगाउँदा डण्डीफोरका दागहरु लोप हुन्छन् ।
-कागतिको रस लगाउनाले छाला र कपाल दुवैमा चमक आउँछ ।
-कपालमा कागतिको रस लगाउनाले कपाल चायामुक्त हुन्छ ।
-अमला छालाका लागि मात्र नभएर कपालका लागि समेत फाइदाजनक छ । अमलाको सेवनले छालामा चमक आउनुका साथै कपाल लामो, बाक्लो र मजबुत हुन्छ ।
-अमलाको नियमित सेवनले चाउरीपनाको समस्या पनि कम हुन्छ ।
-अनुहारमा अमला पाउडर लगाउँदा छालामा निखार आउँछ ।
एन्टि एजिङ गुण भएको अदुवाको सेवनले छाला लामो समयसम्म जवान रहन्छ ।
दैनिक बिहान खाली पेटमा अदूवा चपाउँदा छाला आकर्षक र सुन्दर देखिन्छ ।
अदुवाको रस निकै असरदार हुन्छ । यसलाई अनुहारमा लगाउँदा छला चम्किलो हुन्छ ।
जीवन शैली बाट अन्य
दाँत स्वास्थ्य मात्र होइन, सुन्दर पनि हुनुपर्छ स्वस्थ र राम्रो कसरि बनाउने यस्ता छन् सरल उपाए
दाँत, शरीरको यो हिस्सा बहुउपयोगी छ । दाँतको सम्बन्ध मूलत, दुई कुरासँग छ । एक स्वास्थ्य, दोस्रो सौन्दर्य । पहिलो कुरा, दाँतको मूख्य काम खानेकुरा चपाउनु हो । यसर्थ दाँतको सम्बन्ध सम्पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्यसँग पनि...
शास्त्रअनुसार बिहान उठ्ने बित्तिकै यी ५ कामहरु गर्नु भएमा, तपाईको पूरा दिन नै अशुभ हुनेछ
शास्त्रअनुसार बिहान उठ्ने बित्तिकै यी ५ कामहरु गर्नु भएमा, तपाईको पूरा दिन नै अशुभ हुनेछ । धर्म शास्त्रअनुसार बिहान राम्रो साइत परे दिनभर राम्रो हुने विश्वास गर्ने गरिन्छ । त्यसैले बिहानको साइतले उक्त दिनको नजिता आउने...